नेपाली राजनीतिमा २०१७ फर्केर हेर्दा :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
आईतबार, माघ ६, २०७५
नेपाली राजनीतिमा २०१७ फर्केर हेर्दा
सोमबारदेखि सन् २०१८ सुरु भयो। नयाँ वर्षको स्वागत गर्दा पुरानो वर्षको पनि सम्झना गरिन्छ। सन् २०१७ मा विश्वका अरु घटनाजस्तै देशभित्रका केही घटना पनि सम्झनलायक छन् ।
चुनाव सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी-
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा अंग्रेजी वर्ष २०१७ नेपाल र नेपालीका लागि विभिन्न कारणले गर्दा विशेष रह्यो । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेपालमा तीन तहको चुनाव हुनु यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो ।
अंग्रेजी वर्षको फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा ऐतिहासिक स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गरे। संविधान घोषणादेखि नै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका मधेसी दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे। उनीहरुको बहिष्कारका बाबजुद पहिलो चरणमा स्थानीय तह चुनाव वैशाख ३१ गते सम्पन्न भयो ।
पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा
पहिलो चरण चुनाव सकिएपछि ०७४ जेठ १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। नेपाली कांग्रेससँग सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयनको लागि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री
२०७४ जेठ २३ गते व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई नेपालको ४० औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित गर्‍यो। उनी चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा देउवा एक्ला उम्मेदवार थिए। देउवाको पक्षमा ३ सय ८८ सांसदले मतदान गरेका थिए ।
लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई कारवाहीको विषय होस् वा महालेखा परीक्षकका प्रमुख चुडामणी शर्मा र नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले गरेका अनियमितताका बिषय हुन, यी विषयले पनि नेपालमा वर्ष २०१७ भरी नै चर्चा पाइरहे ।
नेकपा एमालेसँग सरकारको सहकार्य तोडेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको माओवादी कांग्रेसको संयुक्त सरकारले प्रधानन्याधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा लगेर होस् वा प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवादमा होस्, यी घटनाले यो वर्षभरी नै चर्चा पाइरहे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई एमाले, माओवादीका सांसदले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोगको प्रस्तावले पनि यो वर्ष नेपालमा ठूलो चर्चा पायो । कार्कीलाई अख्तियारबाट हटाउनका लागि दल तथा अदालतलाई हम्मेहम्मे नै पर्यो ।
शुशीला कार्कीमाथि महाभियोग
[caption id="attachment_46037" align="alignnone" width="1200"] प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतबाट मंगलबार बाहिरिदै। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी[/caption]
प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले पनि यो वर्ष ठूलो चर्चा पायो । संसदबाट पारित हुन नसकेको यो प्रस्तावको ठूलो विवाद भएको थियो ।
‘कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको अभियोगमा कांग्रेस–माओवादीले एकाएक अप्रिल ३० मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।
संसदमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि अभियोग दर्ता भएसँगै यसको चौतर्फी विरोध सुरु भयो । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आक्रोश पोखे । कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरुले नै कार्कीमाथिको महाअभियोगलाई लोकतन्त्रमाथिको महाअभियोग भने ।
महाअभियोगविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो । लगत्तै कार्की पुनः काममा फर्किइन् । उनले उमेर हदका कारण अवकास पाइसकिन् भने दलहरुले पनि महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेका छन् ।
महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत थिए ।
जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त
फेब्रुअरी १२ मा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्यो । आईजीपीका दाबेदार ९ ‍( डिआईजी) मा वरियताक्रममा तेस्रो नम्बरका चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि ठूलै खैलाबैला मच्चियो ।
पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल र दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल रहेका थिए । रोलक्रम तथा नियम मिचेरै चन्दलाई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा प्रहरी प्रमुख आईजीपी बनाइएका थिए।
तर, धेरै नै विवाद आएपछि सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गर्यो । हाल अर्याल नै आईजीपी छन् ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विषयले पनि यो बर्ष नेपालमा चर्चा पायो । सरकारले प्रहरी प्रमुखमा आफूभन्दा कनिष्टलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको भन्दै सरकारले सिफारिस गरेका जयबहादुर चन्दका विरुद्ध अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेपछि यो विवादले ठूलो रुप लिएको थियो ।
आफू प्रहरी प्रमुख हुन पाउनुपर्ने दावीसहित अदालतमा गएका सिलवालको सट्टा प्रकाश अर्याल प्रहरीको प्रमुख भएपछि सिलवालले सेवाबाट नै राजिनामा दिएका थिए । अझै रोचक कुरा त प्रहरी प्रमुख हुन नपाएका सिलवाललाई नेकपा एमालेले ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव सदस्यमा उठायो र उनले जितेका पनि छन् ।
तराईमा बाढी पहिरो
अगस्त महिनामा तराईका जिल्लाहरु अविरल वर्षातका कारण आएको बाढीले जलमग्न भए । सर्वसाधारण घरबारविहीन बने । थुप्रैको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए ।
बाढीका कारण करोडौंको सम्पत्ति नोक्सान भयो । सरकारले बाढीपीडितको उद्दार र राहत वितरणका लागि प्रयासहरु गरे पनि अपेक्षा अनुसारको कुनै पनि काम हुन सकेन । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं टिकाटिप्पणीहरु भए। स्वभाविक पनि थियो टिकाटिप्पणी गर्न ।
३३ किलो सुन बरामद
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट अवैधरूपमा काठमाडौँ भित्रिँदै गरेको ३३ किलो सुन जनवरी १४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वार गोल्डेन गेट बाहिरबाट बरामद भयो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विमानस्थलको भन्सार चेकजाँच तथा सुरक्षा घेरा पार गरी दुईवटा सुटकेसमा लुकाई बा१प २९१५ नम्बरको ट्याक्सी प्रयोग गरी गेटबाहिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा उक्त सुन बरामद गरिएको थियो ।
उक्त सुन कसको थियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस र टीकाटिप्पणीहरु भएका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानबाट ३३ किलो सुनको मालिक राजनप्रसाद पन्त भएको पुष्टि भयो । पन्तलाई दुबईबाटै पक्राउ गरी केही महिनाअघि मात्र काठमाडौं ल्याइएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्तिका नेताहरुले बाम गठबन्धन भएको घोषणा गरे । असाेज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा केपी ओली, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रुपमा हात मिलाएर बाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा भएकै दिन सामाजिक सञ्जालहरुमा बाम गठबन्धनले स्थान पायो । सबैले प्रचण्ड, ओली र बाबुरामलाई बधाई दिए । जनताले गठबन्धनबाट अब केही हुने आशा गरेको छ, आजसम्म त्यो आशा पालेर जनता बसेका छन् ।
गठबन्धन भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी नतिजा एकदम उत्साहजनक आएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकार बाम गठबन्धनका नेताले गर्नेछन् ।
तर, चुनावमा मिलेर जाने घोषणा गरेका बाबुराम त्यसको केही दिनपछि गठबन्धनबाट बाहिरिए । गठबन्धनलाई गाली गर्दै बाबुराम निस्केका हुन् ।
[caption id="attachment_107315" align="alignnone" width="1200"] छोराको चितामा दागबत्ती दिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी[/caption]
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको रहस्यमय मृत्यु भयो । यो घटनाले सबै त्रसित भए । लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निवासमा सुतेकै ठाउँमा प्रकाशको मृत्यु भएको थियो ।
तीन दिनयता आफू केही अस्वस्थ भएको बताउँदै आएका प्रकाश दाहाल चुनावको लागि प्रचण्ड झापातिर लागेपछि त्यता नगइकन चितवनबाट काठमाडौं फर्किएका थिए । उनी त्यो रात लाजिम्पाटस्थित निवासमै सुतेका थिए ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार राति ८ बजेतिर प्रकाशले आफूलाई हल्का ज्वरो आइरहेको बताएका थिए । चुनाव लागेका कारण पत्नी बिना पनि कञ्चनपुरतिरै थिइन् । घरमा परिवारका अन्य सदस्यहरु खासै थिएनन् । आमा सीता दाहाल र भाञ्जीहरुमात्रै थिए ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न
२०७४ साल माघभित्र नेपालमा तीन चरणका चुनावमार्फत नेपाललाई संघीय संरचनाको सरकारले चलाउने गरी संवैधानिक व्यबस्था रहेको थियो । सोही व्यबस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई चरणमा गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव एकैपटक सम्पन्न गर्यो ।
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावबाट नेकपा एमाले देशको ठूलो दलको रुपमा उदाएको छ ।
चुनावको समयमा दुई मुख्य कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी तालमेलले पनि नेपालमा राम्रै चर्चा पायो । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकता गर्ने निर्णयसहित चुनावमागएपछि यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हलचल नै मच्चायो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यो वर्ष निकै राम्रो देखियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समयमा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको बताएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बजार मूल्यका आधारमा साढे ७ प्रतिशतले बढेको विश्व बैंकले जनाएको हो ।
विश्व बैंकको नेपाल विकास सूचना अनुसार पछिल्ला वर्षमा सक्रिय मनसुन, विद्युत उपलब्धता, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको गति लगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत पुगेको जनाएको हो ।
यद्यपि आर्थिक वृद्धिमा अझै धेरै चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । सन् २०१५ मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ३ दशमलब ३ प्रतिशतमा झरेको थियो भने त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१६ मा १४ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम बिन्दू अर्थात शून्य दशमलब ४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएको, थोक तथा खुद्रा व्यापार सामान्य हुँदै गएको, यातायात क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको, भूकम्पका कारण रोकिएका १ सय मेगावाट भन्दा बढि जलविद्युत आयोजना समेत संचालनमा आउन थालेको विश्व बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढेपनि नेपालमा निर्यात भन्दा आयात उच्च रहेको विश्व बैंकको भनाई छ ।
नेपालमा अंग्रेजी वर्ष ०१७ शेयर बजारको लागि सामान्य रह्यो । वर्षको सुरुमा १ हजार ४ सय ६५ दशमलब ७२ अंकमा रहेको शेयर बजार नेप्से वर्षको अप्रिल महिनामा सबैभन्दा उच्च १ हजार ७ सय ३ दशमलब ७ अंकमा पुगेको थियो । तर वर्षको अन्तिम दिनमा शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ ।
हेर्नुहोस् वर्षका केही तस्बिरहरू
[caption id="attachment_120056" align="alignnone" width="1204"] 3yrs old TRISHNA SHAKYA being carried by her father towards Kumari Ghar as after declared as the new Living Goddess of Nepal Kumari at Kathmandu, Nepal on Thursday, September 28, 2017.[/caption]
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस १६, २०७४, ०९:५७:२५
ओली र डा. केसीको त्यो दुई घन्टे संवाद
विजौरी सामूहिक बलात्कार काण्ड : १० वर्षपछि मुख्य दोषी पक्राउ,यसरी भएको थियो घटना
केसीसँगको सम्झौता किन तोडियो? फुकाउने विकल्प के थिए?
घुम्न र पढ्नका लागि पाँच महिनामा बाहिरियो ६५ अर्ब
केसीसँग गरेको सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैर-जिम्मेवार : प्रकाशचन्द्र लोहनी
बारम्बार बिग्रिन्छन् मन्त्रीका गाडी
कर्मचारी र प्रहरीमा सरकारको हस्तक्षेप: सभापति देउवा
पहिलोपटक भू-उपयोग ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार
विप्लव समूहद्वारा दुइटा ट्रकमा आगजनी